Celbridge - N'ime obodo
Soro nzọụkwụ Arthur Guinness, ikekwe aha kacha mara Ireland, wee were obere pint zuru ike n'otu n'ime ụlọ ndị ọbịa n'akụkụ okporo ámá nke na-egosi ebe ọmụmụ ya. Ihe oyiyi ndụ ya na-egosi ebe a mara mma ebe ọ nọrọ ọtụtụ oge n'oge ọ bụ nwata. Site ebe a ị nwere ike iso Arthur Way to Ardclough ebe enwere ebe ntụgharị na ihe ngosi, wee gawa n'ihu Oughterard Graveyard - ebe izu ike ikpeazụ ya. Gagharịa na akụkọ ihe mere eme na Celbridge Heritage Trail - site na Christian Tea Lane oge ochie, ebe izu ike nke Grattans; gaa n'ụlọ Ọkà Okwu Connolly's Castletown – Ebe obibi Georgian kacha mma na Ireland; wee gaa n'ihu na obodo Celbridge akụkọ ihe mere eme na-ewere ụzọ dị jụụ n'akụkụ osimiri ma ọ bụ ụzọ osisi mara mma maka nleta na mbara ala Celbridge Abbey nwere njikọ na Jonathan Swift. Maka ihe na-akpali akpali karị, gịnị ma ị ga-enwe ọ enjoyụ n'ụgbọ mmiri na-agbago n'osimiri Liffey, paddle board na Cliff of Lyons ma ọ bụ okirikiri n'akụkụ Grand Canal chere ihu Sallins.
Ebe nlegharị anya kacha mma na Celbridge
Ihe iri di uku ime gburugburu Leixlip & Celbridge
Jụọ mpaghara: Olee ebe ịkpọta ndị ọbịa na Kildare?
Soro nzọụkwụ nke Arthur Guinness
Ntuziaka Onye Nduzi Obodo maara Celbridge Dị ka Akwụkwọ
Chọpụta ihe ndị ọzọ na Celbridge
Nke Celbridge Leixlip
ụlọ oriri na ọṅụṅụNri oriri n’èzí
Arts & OmenalaBọchị mmiri ozuzo